ရာသီဥတုပူကြောင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောဆိုခြင်း - Myanmar Network
ရာသီဥတုပူကြောင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောဆိုခြင်း
Posted by Nay Win Naing on April 28, 2016 at 11:18 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်တည်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အယ်လ်နီညိုဆိုတဲ့ အပူလှိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိပေးမှုတွေ သတင်းတွေ ကြားနေမြင်နေကြရပါတယ်။ ဒီသတင်းတွေအတိုင်း တကယ်လဲ ရာသီဥတုဟာ အလွန်ပူပြင်းနေပါတယ်။ တခါတရံမှာ ဒီပူပြင်းလှတဲ့ ချွေးပြန်စေတဲ့ ရာသီဥတုကို အံတုဖို့ အဲယားကွန်းတွေတောင် မလုံလောက်သလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် တချို့ကတော့ မိုးရာသီကို အမြန်ရောက်ဖို့ ဆုတောင်းနေကြပါတယ်။ ရာသီဥတုပူလာတာနှင့်အမျှ အပူရှိန်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ညည်းညူဖို့ အားလုံးကို အခွင့်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒီလိုရာသီဥတုပူကြောင်း ညည်းညူဖို့ မကျေနပ်ကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆိုဖို့ "It's (very) hot!" "(အရမ်း) ပူလိုက်တာ" ဆိုတဲ့ ရိုးရှင်းသော အသုံးအနှုန်းအပြင် အခြားအသုံးများကို အပြောင်းအလဲအနေနဲ့ သုံးနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ It's nice and warm today. (ဒီနေ့ ရာသီဥတုက သာယာနေတယ်နော်)
"nice" နဲ့ "warm" ကို အကောင်းဘက်က ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ တွဲသုံးပါတယ်။ ပြောတဲ့သူက ပူအိုက်တဲ့ရာသီကို ကြိုက်သူဖြစ်မှာပါ။
၂။ It's pretty hot, isn't it? (ဒီနေ့ တော်တော်ပူတယ်နော်။)
ရာသီဥတု ပူတဲ့အခါ (တော်တော်လေးကို ပူတဲ့အခါ) မှာ သုံးပါတယ်။ ပူတယ်ဆိုတာကို အကောင်းအဆိုးအမြင်မပါပဲ မှတ်ချက်အနေနဲ့ပြောတာပါ။
၃။ We're havingaheatwave! (အပူလှိုင်းဖြတ်နေတယ်။)
၄။ It's so hot! It must be over 80. (အရမ်းပူတာပဲကွာ။ အပူချိန် ၈၀ ဒီဂရီ ('F) ကျော်လောက်တယ်။)
ဒီအသုံးအနှုန်းက နံပါတ် ၂ နဲ့ ဆင်ပါတယ်။ တော်တော်ပူတဲ့ ရာသီဥတုကို ဖော်ပြရာမှာသုံးပါတယ်။ '၈၀' နေရာမှာ လက်ရှိအပူချိန်ပြောင်းသုံးပြီး ပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ It's absolutely boiling! (ရာသီဥတုက တော်တော်ပူပြင်းတာပဲကွာ။) နှင့် ၆။ It's positively tropical today.
ဒီအသုံးအနှုန်း နှစ်ခုကို ရာသီဥတု သာမန်မဟုတ်ပဲ အပူလွန်ကဲနေတဲ့အချိန်၊ နေ့မှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
၇။ It’s going to be another scorcher today. (ဒီနေ့ကတော့ ခြစ်ခြစ်တောက်ပူမဲ့နေ့ပဲဟေ့။)
"hot" (ပူတယ်) ဆိုတဲ့ စကားလုံးအစား သုံးနိုင်တဲ့အသုံးအနှုန်းများကို အဆင့်ဆင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
၁။ It’s scorching! or It’sascorcher! (ခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေတယ်။)
၂။ It’s boiling (hot)! (ပူလိုက်တာ ပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ။)
၃။ It’s sweltering! (ပူလောင် အိုက်စပ်နေတာပဲ။)
၄။ It’s sizzling! (ပူကျွမ်းနေတာပဲ။)
၅။ It’s hot as hell! (ဆိုးဆိုးရွားရွားကို ပူတာပဲ။)
၆။ It’s so hot you could fry an egg on the sidewalk! (ပူလွန်းလို့ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ကြက်ဥတောင် တင်ကြော်လို့ရလောက်တယ်။)
၇။ It’s ridiculously hot! (မတော်မတရားကို ပူတာပဲ။)
တစ်စုံတစ်ယောက်က မနက်ဖြန် ရာသီဥတု ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲလို့ မေးတဲ့အခါမျိုးမှာရော ဘယ်လိုဖြေမလဲ။
၁။ Looks like we’re in forahot one - they’re predicting record highs this week.
စာကြောင်းရဲ့ ပထမအပိုင်းကတော့ "ငါတို့ ပူအိုက်တဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ ကြုံတွေ့ရတော့မယ်" လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် (စံချိန်တင်လောက်အောင် အပူချိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်ခြေရှိတယ်) ကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ It sure isascorcher today.
"Scorcher" ဆိုတာ ခြစ်ခြစ်တောက်ပူတယ်၊ အရမ်းကို ပူတဲ့နေ့လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဒီလိုပူပြင်းတဲ့နေမျိုးမှာ စကားစတဲ့ အချိန်မှာ သုံးလို့ရပါတယ်။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်က ဒီလိုလာပြောရင်တော့ “Sure is!” (သို့) “I’ll say!” (သေချာတာပေါ့) လို့ အလိုက်သင့်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
၃။ There’s notacloud in the sky.
ကောင်းကင်ပေါ်မှာ တိမ်တွေမရှိဘဲ နေပူပြီး ပူပြင်းမည့် ရာသီဥတုကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၄။ We’re having quiteaheatwave!
"Heatwave" ဆိုတာကတော့ ရက်ဆက်တိုက် ပူပြင်းနေတာ၊ အပူလှိုင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
ရာသီဥတု ပူပြင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အခြားဝေါဟာရများ
dog days - နှစ်တစ်နှစ်တွင် အပူရှိန်အမြင့်ဆုံး ရက်များ
the heat - အရမ်း ပူလောင်သော ရာသီဥတု
Indian summer - ဆောင်းဦးရာသီမှာ ပူနွေးသော ကာလ
severe weather - အလွန်ဆိုးရွားသော ရာသီဥတု (ဤရာသီတွင် ထိခိုက် အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်သည်)
fierce weather - ပြင်းထန်သော ရာသီဥတု
humid - သက်တောင့်သက်သာမရှိလောက်အောင် ပူလောင်ပြီး စိုထိုင်းနေသည် (လေထဲတွင် ရေငွေ့များစွာရှိသောကြောင့်)
sultry weather - လေထုမှာ ပူလောင်ပြီး စိုစွတ်နေသည့် ရာသီဥတု
Ihbristol.com မှ Hot weather ၊ learnenglishwithdemi.wordpress.com မှ Talking about HOT WEATHER ၊ keepsmilingenglish.com မှ 10 Expressions To Complain About Hot Weather နှင့် macmillandictonary မှ Words used to describe unpleasant weather တို့မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈလလောကျတညျးက မွနျမာနိုငျငံမှာ အယျလျနီညိုဆိုတဲ့ အပူလှိုငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး သတိပေးမှုတှေ သတငျးတှေ ကွားနမွေငျနကွေရပါတယျ။ ဒီသတငျးတှအေတိုငျး တကယျလဲ ရာသီဥတုဟာ အလှနျပူပွငျးနပေါတယျ။ တခါတရံမှာ ဒီပူပွငျးလှတဲ့ ခြှေးပွနျစတေဲ့ ရာသီဥတုကို အံတုဖို့ အဲယားကှနျးတှတေောငျ မလုံလောကျသလိုဖွဈနတေဲ့အတှကျ တခြို့ကတော့ မိုးရာသီကို အမွနျရောကျဖို့ ဆုတောငျးနကွေပါတယျ။ ရာသီဥတုပူလာတာနှငျ့အမြှ အပူရှိနျနှငျ့ ပတျသကျပွီး ညညျးညူဖို့ အားလုံးကို အခှငျ့ပေးလိုကျသလိုပါပဲ။ ဒီလိုရာသီဥတုပူကွောငျး ညညျးညူဖို့ မကနြေပျကွောငျးကို အင်ျဂလိပျလို ပွောဆိုဖို့ "It's (very) hot!" "(အရမျး) ပူလိုကျတာ" ဆိုတဲ့ ရိုးရှငျးသော အသုံးအနှုနျးအပွငျ အခွားအသုံးမြားကို အပွောငျးအလဲအနနေဲ့ သုံးနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ It's nice and warm today. (ဒီနေ့ ရာသီဥတုက သာယာနတေယျနျော)
"nice" နဲ့ "warm" ကို အကောငျးဘကျက ပွောခငျြတဲ့အခါမြိုးမှာ တှဲသုံးပါတယျ။ ပွောတဲ့သူက ပူအိုကျတဲ့ရာသီကို ကွိုကျသူဖွဈမှာပါ။
၂။ It's pretty hot, isn't it? (ဒီနေ့ တျောတျောပူတယျနျော။)
ရာသီဥတု ပူတဲ့အခါ (တျောတျောလေးကို ပူတဲ့အခါ) မှာ သုံးပါတယျ။ ပူတယျဆိုတာကို အကောငျးအဆိုးအမွငျမပါပဲ မှတျခကျြအနနေဲ့ပွောတာပါ။
၃။ We're havingaheatwave! (အပူလှိုငျးဖွတျနတေယျ။)
၄။ It's so hot! It must be over 80. (အရမျးပူတာပဲကှာ။ အပူခြိနျ ၈၀ ဒီဂရီ ('F) ကြျောလောကျတယျ။)
ဒီအသုံးအနှုနျးက နံပါတျ ၂ နဲ့ ဆငျပါတယျ။ တျောတျောပူတဲ့ ရာသီဥတုကို ဖျောပွရာမှာသုံးပါတယျ။ '၈၀' နရောမှာ လကျရှိအပူခြိနျပွောငျးသုံးပွီး ပွောဖို့ဖွဈပါတယျ။
၅။ It's absolutely boiling! (ရာသီဥတုက တျောတျောပူပွငျးတာပဲကှာ။) နှငျ့ ၆။ It's positively tropical today.
ဒီအသုံးအနှုနျး နှဈခုကို ရာသီဥတု သာမနျမဟုတျပဲ အပူလှနျကဲနတေဲ့အခြိနျ၊ နမှေ့ာ သုံးနိုငျပါတယျ။
၇။ It’s going to be another scorcher today. (ဒီနကေ့တော့ ခွဈခွဈတောကျပူမဲ့နပေဲ့ဟေ့။)
"hot" (ပူတယျ) ဆိုတဲ့ စကားလုံးအစား သုံးနိုငျတဲ့အသုံးအနှုနျးမြားကို အဆငျ့ဆငျ့ကွညျ့နိုငျဖို့ အောကျမှာဖျောပွထားပါတယျ။
၁။ It’s scorching! or It’sascorcher! (ခွဈခွဈတောကျပူနတေယျ။)
၂။ It’s boiling (hot)! (ပူလိုကျတာ ပွုတျထားတဲ့အတိုငျးပဲ။)
၃။ It’s sweltering! (ပူလောငျ အိုကျစပျနတောပဲ။)
၄။ It’s sizzling! (ပူကြှမျးနတောပဲ။)
၅။ It’s hot as hell! (ဆိုးဆိုးရှားရှားကို ပူတာပဲ။)
၆။ It’s so hot you could fry an egg on the sidewalk! (ပူလှနျးလို့ ပလကျဖောငျးပျေါမှာ ကွကျဥတောငျ တငျကွျောလို့ရလောကျတယျ။)
၇။ It’s ridiculously hot! (မတျောမတရားကို ပူတာပဲ။)
တဈစုံတဈယောကျက မနကျဖွနျ ရာသီဥတု ဘယျလိုအခွအေနရှေိလဲလို့ မေးတဲ့အခါမြိုးမှာရော ဘယျလိုဖွမေလဲ။
စာကွောငျးရဲ့ ပထမအပိုငျးကတော့ "ငါတို့ ပူအိုကျတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ ကွုံတှရေ့တော့မယျ" လို့ဆိုလိုတာဖွဈပွီး နောကျတဈပိုငျးကတော့ မိုးလဝေသခနျ့မှနျးခကျြ (စံခြိနျတငျလောကျအောငျ အပူခြိနျတှမွေငျ့တကျလာနိုငျခွရှေိတယျ) ကို ပွောတာဖွဈပါတယျ။
"Scorcher" ဆိုတာ ခွဈခွဈတောကျပူတယျ၊ အရမျးကို ပူတဲ့နလေို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။ မိတျဆှတေဈယောကျယောကျနဲ့ ဒီလိုပူပွငျးတဲ့နမြေိုးမှာ စကားစတဲ့ အခြိနျမှာ သုံးလို့ရပါတယျ။ အကယျ၍ တဈယောကျယောကျက ဒီလိုလာပွောရငျတော့ “Sure is!” (သို့) “I’ll say!” (သခြောတာပေါ့) လို့ အလိုကျသငျ့ပွောဆိုနိုငျပါတယျ။
ကောငျးကငျပျေါမှာ တိမျတှမေရှိဘဲ နပေူပွီး ပူပွငျးမညျ့ ရာသီဥတုကို ဖျောပွခွငျးဖွဈပါတယျ။
"Heatwave" ဆိုတာကတော့ ရကျဆကျတိုကျ ပူပွငျးနတော၊ အပူလှိုငျးကို ဆိုလိုပါတယျ။
ရာသီဥတု ပူပွငျးခွငျးနှငျ့ ပတျသကျသော အခွားဝေါဟာရမြား
dog days - နှဈတဈနှဈတှငျ အပူရှိနျအမွငျ့ဆုံး ရကျမြား
the heat - အရမျး ပူလောငျသော ရာသီဥတု
Indian summer - ဆောငျးဦးရာသီမှာ ပူနှေးသော ကာလ
severe weather - အလှနျဆိုးရှားသော ရာသီဥတု (ဤရာသီတှငျ ထိခိုကျ အန်တရာယျဖွဈတတျသညျ)
fierce weather - ပွငျးထနျသော ရာသီဥတု
humid - သကျတောငျ့သကျသာမရှိလောကျအောငျ ပူလောငျပွီး စိုထိုငျးနသေညျ (လထေဲတှငျ ရငှေမြေ့ားစှာရှိသောကွောငျ့)
sultry weather - လထေုမှာ ပူလောငျပွီး စိုစှတျနသေညျ့ ရာသီဥတု
Ihbristol.com မှ Hot weather ၊ learnenglishwithdemi.wordpress.com မှ Talking about HOT WEATHER ၊ keepsmilingenglish.com မှ 10 Expressions To Complain About Hot Weather နှငျ့ macmillandictonary မှ Words used to describe unpleasant weather တို့မှ ကိုးကားဘာသာပွနျဆိုထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by htaylim on May 2, 2016 at 20:01